Cream ဒိန်ခဲအေးခဲခြင်းနှင့်အတူ Spiced Applesauce ကိတ်မုန့်စာရွက် - ကိတ်မုန့်
ဒါ applesauce ကိတ်မုန့်စာရွက် ငါ့ကိုပယ်တော်မူပြီ တစ်ခုချင်းစီကိုကိုက်ပန်းသီးကောင်းကင်ကို spiced ခဲ့သည်။ နှင့်ပေါင်းခဲ့သည် မုန့်ဒိန်ခဲနှင်းခဲ နှင့်အိမ်လုပ်နှင့်အတူပဲရှိတယ် caramel ယို ငါမစားချင်ဘူး!
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်သည်ကြက်ဥနည်းနည်းနှင့်ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးသောပထမဆုံးကိတ်မုန့်ဖြစ်သည်။ applesauce ကဥကိုအစားထိုးပေးတယ်ဆိုတာကြားဖူးပေမဲ့ငါသံသယ ၀ င်ခဲ့တယ်။ ငါသည်ဤကိတ်မုန့်အလွန်စိုစွတ်သည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ texture နှင့်အရသာရှိပါတယ်အစီရင်ခံရန်ဝမ်းသာတယ်! ဤမုန့်ကိတ်မုန့်သည်အခြားချက်ပြုတ်နည်းများထက်ကြက်ဥတစ်မျိုးတည်းနှင့်ဆီနည်းသည်ကိုသာအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်အဆီလျှော့ချရန်ကြိုးစားလျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ပထမဆုံး applesauce ကိတ်မုန့်ကောင်းကောင်းကိုပထမဆုံးစမ်းသပ်နေတုန်း applesauce cake ကပန်းသီးလိုအရသာရှိသင့်မသင့်ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးခဲ့သည်။
အဆိုပါရယ်စရာအရာ, ငါသည်သင်တို့ကိုပင်ဤကိတ်မုန့်၌ပန်းသီးရှိပါတယ်ပြောနိုင်မထင်ကြဘူး။ အဆိုပါကိတ်မုန့်အများစုအမွှေးအကြိုင်ကိတ်ပေမယ့် moister တူသောအရသာ။ ဒါက applesauce ကနေပဲ! ဒါကြောင့်ဒီ applesauce ကိတ်မုန့်စာရွက်ပန်းသီးများကဲ့သို့မြည်းစမ်းဖို့မျှော်လင့်မထားဘူး, ကပဲနွေးပျူငှါနွေးထွေးသောအမွှေးအကြိုင်ကိတ်မုန့်နှင့်တူအရသာ။ ဘယ်မကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး!
ဘာကြောင့်မုန့်ဖုတ်တဲ့အခါ applesauce ကိုသုံးရမလဲ။
ပန်းသီးဆော့စ်ကိုသင့်ရဲ့ကိတ်မုန့်ထဲထည့်ပြီး 1: 1 ဆီဒါမှမဟုတ်အရည်ကျိုထောပတ်အစားထိုးအဖြစ်ထည့်နိုင်ပါတယ် ။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကိတ်မုန့်ကိုအစိုဓာတ်မဆုံးရှုံးစေဘဲပိုမိုကျန်းမာစေလိုပါကသင်၏ချက်စာတွင်အဆီနှင့်ကယ်လိုရီစုစုပေါင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။
သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် applesauce ကိုအသုံးပြုပြီးသင်၏ဥအချို့ကိုအစားထိုးပါ ။ ကြက်ဥတစ်လုံးအစားမချိုသော applesauce လေးခွက်ကိုသုံးပါ။ ပန်းသီးထည့်တဲ့အတွက်ကြက်ဥအရေအတွက်ကိုတကယ်လျှော့ချလိုက်တယ်။
သင်စတိုးဆိုင် ၀ ယ်ထားသောပန်းသီးဆော့စ်ကိုသုံးနိုင်သလားသို့မဟုတ်လတ်ဆတ်အောင်ပြုလုပ်သင့်သလား။
သငျသညျဖြစ်စေသုံးနိုင်သည် အိမ်လုပ်မွှေးသော applesauce သို့မဟုတ်စတိုးဆိုင် - ဝယ် applesauce ။ သငျသညျကိတ်မုန့်ရဲ့ချိုမြိန်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်သကြားမပါဘဲပိုမိုနှစ်သက်သည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပန်းသီးစေ့အောင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာရန်စိတ်ဝင်စားပါက၎င်းသည်အလွန်လွယ်ကူပါသည်။
ငါကြီးပြင်းလာတာနဲ့နှစ်တိုင်းပန်းသီးဆော့စ်လုပ်ပြီးစည်သွတ်တယ်။ ငါကလေးဘဝတုန်းကပန်းသီးထွက်အောင်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့တူတူပဲ။ စားပွဲပေါ်မှာကပ်လျက်ဒီအရူးထည်ပစ္စည်းပဲ။ ပန်းသီးကောက်ခြင်း၊ ခုတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ပျော့ပျောင်းသောပန်းသီးအသားမှအသားများနှင့်အစေ့များကိုခွဲထုတ်မည့်စက်ထဲသို့မထည့်မီချက်ပြုတ်သည်။
ထို့နောက်ပန်းသီးဆပ်ပြာကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးရရှိနိုင်သည်။ ဒီအိမ်လုပ်ပန်းသီးဆော့ဝဲနဲ့ ၀ ယ်ထားတဲ့ဝက်သားခုတ်ကောင်ကိုငါမှတ်မိသေးတယ်။
အရင်ကကိတ်မုန့်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏စောင့်ကြည့်ရေး“ သင့်ရဲ့ပထမဆုံးကိတ်မုန့်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ ပေါင်မုန့်ဖုတ်ခြင်း၊ နှင်းခဲခြင်း၊
သင်၏ကိတ်မုန့်အလွှာများကိုဖုတ်ပြီးနောက်၊ ငါသတ္တုတွင်းထဲမှာဒြပ်ထုထဲကို ၁၅ မိနစ်လောက်အေးအောင်ထားပြီးတော့ငါသူတို့ကိုနောက်ထပ်အအေးခံဖို့အအေးခံစင်ပေါ်ကိုလှန်လိုက်တယ်။
ငါလုပ်နေတာအခါ vanilla ကိတ်မုန့် သို့မဟုတ်အခြားပိုမိုပေါ့ပါးသောကိတ်မုန့်များကိုကျွန်ုပ်အမိုးခုံးနှင့်အညိုရောင်အနားများကိုဖြတ်ပစ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်ထိုသို့သောကိတ်မုန့်မျိုးအတွက်သင်ထိုသို့လုပ်ရန်မလိုပါ။ သင်၏အအေးများကိုဖြည့်ခြင်းမပြုမီသင်၏အလွှာများကိုပြားချပ်ချပ်လုပ်ရန်အမိုးခုံးကိုချုံ့ပါ။
အကြှနျုပျ၏ကိတ်မုန့်နှင့်ပြည့်စုံခြင်းနှင့် frosted ဖြစ်ပါတယ် မုန့်ဒိန်ခဲနှင်းခဲ ဒါပေမယ့် အညိုရောင်ထောပတ် buttercream ဒါ့အပြင်အံ့သြဖွယ်အရသာမယ်လို့!
ငါကိတ်မုန့်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူစူပါရိုးရှင်းသွားရုံကောင်းသောမုန့်ဒိန်ခဲအေးခဲခြင်းနှင့်ကောင်းတစ် ဦး လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် caramel ငံပြာရည်ယို ။
ငါ့မှာရေခဲသေတ္တာထဲမှာကျန်နေတဲ့ကရမေလွမ်တစ်လုံးရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကအပူနည်းနည်း (ပူမဟုတ်!) ပူပြီးပလပ်စတစ်ပုလင်းထဲထည့်လိုက်တယ်။
ထို့နောက်ငါကိတ်မုန့်ကိုဝီလ်တန်အမှတ်အသား # ၃၂ ကို အသုံးပြု၍ စူပါရိုးရှင်းသော dollcream ကော်ပိုရေးရှင်းများဖြင့်ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဒီပန်းသီးဆပ်ပြာကိတ်မုန့်ဟာငါတို့အိမ်မှာအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့တယ်။ တိုင်းနောက်ဆုံးကိုက်စားခဲ့သည်! ကိတ်မုန့်သည်စိုထိုင်းသောဖြစ်ပြီးခရင်မ်မှိုအေးခဲနေသောကြောင့်အလွန်ဟန်ချက်ညီသည်။
ဒီ applesauce ကိတ်မုန့်ကို stacked ကိတ်မုန့်တွေအတွက်သုံးနိုင်ပါသလား။
သငျသညျ stacked ကိတ်မုန့်အဘို့ဤကျိန်းသေဒီ applesauce ကိတ်မုန့်စာရွက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာ buttercream နှင့် fondant အောက်မှာတက်ကိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ခိုင်မာတဲ့သောကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအစအနရှိပါတယ်။
ဒါကို applesauce cupcakes အဖြစ်လုပ်လို့ရမလား။
သင်သည်ဤစာရွက်ကိုဆီထုတ်ယူခြင်းအားဖြင့် applesauce မယားစကားများအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့မီးဖို400ºFမှအပူ။ သင်၏မယားစကားအပြည့်ဖြည့်သည့်လမ်း၏ ၂/၃ ကိုဖြည့်ပါ။ ငါရေခဲမုန့်ကျီငယ်ငယ်လေးလိုချင်ပါတယ် သင်၏ကိတ်မုန့်များကို ၅ မိနစ်ဖုတ်ပြီး400ºFတွင်အပူကို 350 theF အထိလျှော့ချပါ။ မီးဖိုကိုမဖွင့်ပါနှင့်။ မီးဖိုကိုဖွင့်လိုက်ခြင်းကသင်၏မယားစကားများပျံ့နှံ့သွားနိုင်သည်။
နောက်ထပ် ၁၀-၁၅ မိနစ်ခန့်သို့မဟုတ်အမိုးခုံးများမသတ်မှတ်မှီတိုင်အောင်ဖုတ်ရမည်။ အဆိုပါမယားစကားအေးခဲခြင်းမပြုမီအအေးပေးပါ။
Cream ဒိန်ခဲအေးခဲခြင်းနှင့်အတူဖရုံသီး Spice ကိတ်မုန့်
ပန်းသီးဆော့စ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့အရသာရှိတဲ့အမွှေးအကြိုင်ကအရမ်းစိုစွတ်နေတယ်။ မုန့်ဒိန်ခဲအေးခဲနှင့်အတူအေးခဲ! ဤစာရွက်သည် ၆'x2 'ကိတ်မုန့်သုံးခု၊ ပြင်ဆင်ချိန် -ဆယ့်ငါး မိနစ် ချက်ပြုတ်ချိန် -၃၅ မိနစ် ကယ်လိုရီ၂၄၄kcal
▢၄ oz (၁၁၃ ဆ) unsalted ထောပတ် ပျော့ပျောင်းသည်
▢၁၀ oz (၂၈၃ ဆ) သကြားဓာတ်
▢၃ oz (၈၅ ဆ) ဆီ
▢၁ ကြီးမားသည် (၁) ဥ အခန်းအပူချိန်
▢၁၀ oz (၂၈၃ ဆ) မုန့်ညက်မုန့်ညက်
▢၁/၈ Tsp (၁/၈ Tsp) လေးညှင်းပွင့်
▢1/4 Tsp (1/4 Tsp) အခွံမာ
▢1/4 Tsp မြေဂျင်း
▢1 1/2 Tsp (1 1/2 Tsp) သစ်ကြံပိုးခေါက်
▢1/2 Tsp (1/2 Tsp) ဆားငန်
▢၁၂ oz (340 ဆ) ပန်းသီး မချိုဘူး
▢၁ Tsp (၁ Tsp) vanilla
▢၁၆ oz (454 ဆ) ဒိန်ခဲမုန့် ပျော့ပျောင်းသည်
▢၈ oz (၂၂၇ ဆ) unsalted ထောပတ် ပျော့ပျောင်းသည်
▢၁ Tsp လိမ္မော်ရောင်ထုတ်ယူ
▢၃၆ oz (1020 ဆ) သကြားမှုန့်
▢# 32 Wilton ပိုက်သိကောင်းစရာ
မီးဖိုအား350º F / 176º to အပူပေးပြီးအပူပေးပါ။ သင်၏အိုးများကိုကိတ်မုန့်သို့မဟုတ်အခြားပိုမိုနှစ်သက်သောဒယ်အိုးဖြင့်ပြင်ဆင်ပါ။
သင်၏မုန့်ညက်၊ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ၊ နံ့သာနှင့်ဆားများကိုအတူတကွစုပ်ယူလိုက်ပါ။
သင့်ရဲ့ရပ်တည်ချက်ရောနှော၏ပန်းကန်ထဲမှာ, whisk ပူးတွဲမှုနှင့်အတူချောချောမွေ့မွေ့သည်အထိထောပတ်။
သကြား၌ဖြန်းပြီးအဖြူနှင့် fluffy (2-3 မိနစ်) တိုင်အောင်မြင့်မားသောနှင်တံ။ သင်၏ဆီထဲသို့ထည့်ပြီးနောက်ထပ်တစ်မိနစ်ရိုက်။
လှော်ပူးတွဲမှုသို့ပြောင်းပါ။ ကြက်ဥနှင့် vanilla ထဲသို့ထည့်ပြီးပေါင်းစပ်သည်အထိရောမွှေပါ။
Battery ကိုပြင်ဆင်ထားသောအိုးများအကြားညီမျှစွာခွဲပါ။ ထိပ်ရော်ဘာ spatula နှင့်အတူချောမွေ့စေ။ သူတို့အလယ်တွင်မြဲမြံစွာခံစားရပြီးသွားကြားထိုးတံသည် ၂၅-၃၅ မိနစ်ခန့်တွင်သန့်ရှင်းသောအရာများသို့မဟုတ်အနည်းငယ်မျှသောအစအနများဖြင့်ထွက်သွားသည့်အထိကိတ်မုန့်များကိုဖုတ်ပါ။
သင့်ရဲ့လိမ္မော်ရောင်ထုတ်ယူနှင့်ဆားထည့်ပါ။ တစ်ပြိုင်တည်းဆန်ခါအမှုန့်တစ်ခွက်တွင်တစ်ခွက်ထည့်။ ရောမွှေပါ
ငါတို့ရှိသမျှသည် pasteurized ကြက်ဥဖြစ်ကြသည်